Tsy mirehareha ny amin’ny tena
"Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao: dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah." - Jer. 9:23.
Fanao tsy mendrika ny mirehareha ny amin'ny tena. - COL, t. 401. Ilay baiko dia tsy nanao hoe: "Aoka izay te- hirehareha, hirehareha ny amin'ny tenany", fa "hirehareha ny amin'Andriamanitra kosa" (...) Noho izany, tsy misy tokony hireharehan'ny olona ny amin'ny tenany mihitsy. Satria, na ny fitahiana rehetra izay ifaliany, na ny toetra tsara rehetra ananany, dia noho ny fahasoavan'i Kristy avokoa no nahatonga ireny. Tsy misy tokony hanandra-tena sy hihambo ho manam-pahendrena na manam-pahamarinana (...)
Ireo manana fanandramana lalim-paka ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra, dia ireo no lavitra indrindra ny avonavona sy ny fanandratan-tena. Izy ireo no manana fisainana manetry tena indrindra, ary mandray ny voninahitra sy ny fahatsaran'i Kristy ho ambony indrindra (...) Rehefa mifantoka amin'ny lanitra ny masontsika, ary rehefa mazava tsara amintsika ny toetran'i Kristy, dia hanandratra ny Tompo Andriamanitra ao anatin'ny fontsika isika.
Rehefa miha-mahafantatra tsara ny tantaran'ny Mpanavotra ny olona iray, dia hahita fa maro tokoa ny kilemany; lehibe loatra ny tsy fitoviany amin'i Kristy hany ka tsapany ny fiovana lalim-paka tanteraka eo amin'ny fiainany. Na izany aza dia manohy mianatra hatrany izy sady maniry ny ho tonga tahaka Ilay Ohatra Lehibe arahiny. Alainy tahaha ny endrika sy ny fisainan'Ilay Tompo malalany. Amin'ny alalan'ny fibanjinany Azy (...) dia manjary voaova hitovy endrika Aminy izy.
Raha manalavitra ny fijerintsika amin'i Jesôsy isika dia tsy ho afaka haka tahaka ny fiainany, fa amin'ny firesahana Aminy kosa, amin'ny fibanjinana ny fahatanterahany, amin'ny fikatsahana hanatsara sy hanandratra hatrany ny toetra, ka miezaka, amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana, amin'ny alalan'ny asa mafy sy feno fikirizana, hanatratra Ilay Modely Tonga Lafatra, no hahavitantsika izany. Amin'ny fahalalantsika an'i Kristy - ny Teniny, ny fanaony, ary ny leson'ny fampianarany - no manjary hakantsika ireo toetra tsara izay nodinihintsika akaiky, sy mahatonga antsika hanana ilay fisainany izay nampiaiky volana antsika. Manjary Ilay "notsongaina tamin'ny alinalina" sy Ilay "maha-te ho tia avokoa" i Jesôsy ho antsika.- RH, 15 Martsa 1887.